Sheekh Shariif oo ka guuray Hoygii uu ka degganaa Aagga Garoonka – XAMAR POST
Sheekh Shariif oo ka guuray Hoygii uu ka degganaa Aagga Garoonka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa xalay ka guuray hoygii uu ka deganaa agagaarka Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in Sheekh Shariif uu degay Guri ku yaalla degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir gaar ahaan meel ku dhow Guri uu Cabdicaiis ka degan yahay Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Dad ayaa ku warramay inay arkayeen gaadiid farabadan oo nooca dagaalka oo galbinayay Sheekh Shariif, xili uu tegayay halka loo diyaariyay inuu dego oo aad ugu dhow Isgoyska Mirinaayo.
Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan kasoo guuray hoygii uu ka deganaa agagaarka Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isagoona degay degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah qorshe Musharaxiinta Madaxweynaha ku dagayaan xaafadaha Magaalada Muqdisho, iyagoo ka guuraya goobihii ay degenaayeen ee nawaaxiga Garoonka diyaaradaha, kadib markii dowladda muddo kororsi sameeysay
Dhageyso: Beeraleyda K/Galbeed Oo la barayo Naqshad Cusub
Wafdi Wasiir Khadiijo Diiriye Horkaceyso Oo gaaray Baydhabo